ထီ - Aung Bar Lay Camera Hti Pauk Sin AungBarLay - Free Android app | AppBrain
Android Apps > Tools > ထီ - Aung Bar Lay Camera Hti Pauk Sin AungBarLay
ထီ - Aung Bar Lay Camera Hti Pauk Sin AungBarLay
The 1st and only AI Camera Hti to check Aung Bar Lay Lottery result with no ads
by Thit Lwin Labs
Jun 14, 2020 New App Version 1.0.4 in TOOLS for Free
Thit Lwin Labs
(ယူနီကုဒ်မြန်မာ) (For English, please scroll down)
ကြော်ငြာမပါပဲ Artificial-Intelligence (AI) ကင်မရာနဲ့ ထီတိုက်ကြမယ်။
ထီလက်မှတ်နံပါတ်ကို ကင်မရာနှင့်ချိန်ပြီး ရိုက်ပါ။
ထီလက်မှတ်နံပါတ်ကို ကင်မရာ Portrait mode နှင့်ချိန်ပြီး နံပါတ်ဟာ ပြတ်သားပြီး ပုံထဲမှာ သေသေချာချာမြင်နေရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ လိုအပ်လျှင် နံပါတ်ကို အနီးကပ်ရိုက်ပါ။ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုရှိဖို့လိုပါတယ်။
ဤအပ်ပလီကေးရှင်းကို ယခုထက်ကောင်းမွန်အောင် မွန်းမံဆဲပါ။ အကြံပေးစာနှင့် အနာဂတ် AI ထုတ်လုပ်မှု အတွက် [email protected] ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
ဤအပ်ပလီကေးရှင်းကို ၄ မျိုး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
၁) AI ကင်မရာဖြင့် တိုက်ခြင်း
၂) ၁ စောင်ချင်း တိုက်ခြင်း
၃) အစောင်ရေ အများ တိုက်ခြင်း (အက္ခရာတူ၊ နံပါတ်စဉ်)
၄) အစောင်ရေ အများ တိုက်ခြင်း (အက္ခရာစဉ်၊ နံပါတ်တူ)
ဤအပ်ပလီကေးရှင်းဟာ အောင်ဘာလေထီထုတ်လုပ်သူနှင့် သက်ဆိုင်မှုမရှိပါ။
AI ကို ထီတိုက်ရုံမက အခြားရှုပ်ထွေးသော အလုပ်များအတွက်ပါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဤအပ်ပလီကေးရှင်းဟာ AI ဥပမာ ၁ ခုသာဖြစ်ပါတယ်။
Check Myanmar lottery result with Artificial-Intelligence (AI) camera with NO ADS!!!
Simply snap ticket number with camera and check result instantly! No more hassle keying in ticket numbers.
When snapping ticket numbers with camera, make sure ticket numbers are clear, aligned to camera and camera is in PORTRAIT mode. Internet access is required for the app to function.
This app is under progressive development and and awaiting feedback, suggestions and future AI-related developments at [email protected]
There are4modes available:
1) Checking with AI camera (One or more tickets)
2) Checkingasingle ticket
3) Checkingaseries of tickets (same alphabets, ascending numbers)
4) Checkingaseries of tickets (ascending alphabets, same number)
This is app is not affiliated with official Myanmar Ticket department. This isa3rd party app developed independently, not only to accommodate customer needs, but also to showcase how AI can help with various tasks, even foratrivial task like checking lottery ticket result.
ascending camera checking myanmar numbers ticket ကင်မရာ ကင်မရာဖြင့် ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ် ကြော်ငြာမပါပဲ တိုက်ခြင်း ထီတိုက်ရုံမက ထီလက်မှတ်နံပါတ်ကို နံပါတ်ဟာ ပြတ်သားပြီး ယူနီကုဒ်မြန်မာ သေသေချာချာမြင်နေရဖို အခြားရှုပ်ထွေးသော အစောင်ရေ အနီးကပ်ရိုက်ပါ အများ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ဤအပ်ပလီကေးရှင်းကို ဤအပ်ပလီကေးရှင်းဟာ ူနှင့်
all alphabet app good lottery thank use very would ဂျင်း
all alphabet amend amendment app cemera detections good thank very
Android Jetpack core Android Architecture Components Firebase Android Jetpack VersionedParcelable Android Jetpack Annotations Android Jetpack Widgets Android Jetpack AppCompat Android Jetpack Media AndroidX Activity Android Activity Saved State Android Transition Support Library AndroidX Loader AndroidX Legacy: Support Library core utils Android Support Library collections AndroidX Legacy: Support Library core UI AndroidX Cursor Adapter AndroidX Local Broadcast Manager Android Support Library Print Android Support Library Document File Android Support Library Async Layout Inflater Android Support VectorDrawable Okio AndroidX Widget ViewPager2 Google ZXing BoltsFramework AndroidX ExifInterface React Native Yoga
Zin Naung Naung Thet